အနှစ်သာရ: ဘုရားအလောင်းဖြစ်ရန်ပင် အမှန်ခဲယဉ်းခြင်း
Zawgyi Font Download
ကျွန်ုပ်၏ မှတ်စုများ (4)
သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓ သဗ္ဗညုတဘုရားရှင် အဖြစ်ကို မဆိုထားဘိ သုမေဓာရသေ့ ကဲ့သို့ နိယတဗျာဒိတ်ရ ဘုရား လောင်း တော် ဘ၀ကိုသော်မှလည်း အင်္ဂါရှစ်ပါးနှင့် ပြည့်စုံမှသာ ရနိုင်ပေသည်။ ထိုအင်္ဂါရှစ်ပါးမှာ -
(၁) လူဇာတ်စင်စစ် ဖြစ်ရခြင်း၊
(၂) ယောက်ျားစင်စစ် ဖြစ်ရခြင်း၊
(၃) ထိုဘ၀မှာပင် အရဟတ္တဖိုလ် ရနိုင်လောက်သော တိဟိတ်ပဋိသန္ဓေနှင့် ပြည့်စုံသူ ဖြစ်ရခြင်း၊
(၄) သက်တော်ထင်ရှား မြတ်စွာဘုရားကို ဖူးတွေ့ရခြင်း၊
(၅) ကမ္မ၀ါဒီရသေ့ (သို့မဟုတ်) သာသနာတော်တွင်း ရဟန်းဖြစ်ရခြင်း၊
(၆) ဈာန် သမာပတ်တန်ခိုး ဂုဏ်ကျေဇူးနှင့် ပြည့်စုံသူ ဖြစ်ရခြင်း၊
(၇) ကိုယ့်အသက်ကို မငဲ့ကွက်ဘဲ သက်တော်ထင်ရှား ဘုရားရှင် ထံတော်၌အလွန်အကြူး ပါရမီကုသိုလ်တို့ကို ပြုစု ပွားများအားထုတ် သူဖြစ်ခြင်း၊
(၈) ဘုရားဖြစ်လိုသော ကုသိုလ်ဆန္ဒအား ကြီးသူ ဖြစ်ခြင်း တို့ဖြစ်သည်။
ဆိုအပ်ပြီးသော အင်္ဂါရှစ်ပါးတို့နှင့် ပြည့်စုံသူဖြစ်မှသာ ဘုရားဆု ပန်နိုင်ခွင့်ရှိသူ ဖြစ်နိုင်၍ ဘုရား လောင်း ဖြစ်ရေးသည်ပင်လျှင် လွန်စွာခဲယဉ်းလှပေသည်၊ မြတ်စွာဘုရား အလောင်းတော် သုမေဓာရှင်ရသေ့သည်ကား အင်္ဂါရှစ်ပါးတို့နှင့် ပြည့်စုံသူဖြစ်သဖြင့် ဒီပင်္ကရာ မြတ်စွာဘုရား၏ ထံတော်မှောက်ဝယ် အလျားမှောက်လျက် ‘‘ နောင်အခါဝယ် ဂေါတမမည်တွင် ဘုရားရှင် ဖြစ်လိမ့်မည်’’ ဟူသော နိယတဗျာဒိတ် ကို ရရှိသူဖြစ်လေသည်။ ထိုဘ၀မှစ၍ ပါရမီဆယ်ပါး၊ အပြားသုံးဆယ်၊ စွန့်ခြင်းကြီးငါးပါး၊ စရိယာသုံးပါးတို့ကို ရပ်နားမရှိ ပါရမီဖြည့် ခဲ့လေသည်။
ဒါနစသော မြင့်မြတ်သော ကျေးဇူးဂုဏ်တို့ကို ပြည့်စုံအောင် ပြုလုပ်တတ်သောကြောင့် ဘုရား အလောင်း တော် ကြီးများ ကို ‘ပရမ’ - သူတော်သူမြတ် ဟုခေါ်သည်။ ထိုသို့ ပရမ မည်သော ဘုရားလောင်း သူတော်ကောင်း တို့ ကျင့်ကြံ ပြုလုပ် အားထုတ်အပ်သော ဒါန စသော တရား ဆယ်ပါး ကို ‘ပါရမီ’ ဟုခေါ်သည်။ ထိုပါရမီ တော်များ သည်-
ဒါန.သီလ၊ နေက္ခမ္မ၊ ပည.၀ီရိယာ။
ခန္တီ.သစ္စ၊ဓိဌာန၊ မေတ္တ. ဥပေက္ခာ-ဟူသော လင်္ကာဆောင်ပုဒ်အရ
(၁၀)ဥပေက္ခာပါရမီ- ဟူ၍ (၁၀)ပါး အပြားရှိသည်။
မိမိခန္ဓာကိုယ်မှ အပဖြစ်သော ပစ္စည်းဥစ္စာတို့ကို စွန့်၍ ဖြည့်ကျင့်လျှင် ပါရမီဆယ်ပါးဖြစ်သည်၊ ကိုယ်အင်္ဂါ အစိတ် အပိုင်းကို စွန့်လွတ်၍ ဖြည့်ကျင့်လျှင် ဥပပါရမီဆယ်ပါးဖြစ်သည်၊ အသက်ကိုစွန့်၍ ဖြည့်ကျင့်လျှင် ပရမတ္ထပါရမီ ဆယ်ပါးဖြစ်သည်။ ဤသို့ဖြင့် ပါရမီဆယ်ပါး အပြားအားဖြင့် သုံးဆယ်ဖြစ်လေသည်။
ပါရမီဆယ်ပါးတို့တွင် ဒါန ပါရမီသည် ဦးစွာ ဖြည့်ကျင့်ရမည့် ပါရမီဖြစ်သည်။ ဒါန တရားသည် စိတ်နှလုံးကို နူးညံ့ စေတတ်သော တရားဖြစ်၏ ။ အလှူဒါန ပြုလုပ်သော သူသည် ထိုဒါန၏ ကျေးဇူးပြုပေးကြောင့် သီလ ဆောက် တည်ရန်၊ သမထဘာဝနာ ပွားများရန်၊ ၀ိပဿနာ ဘာဝနာပွားများရန် စိတ်နှလုံးနူးညံ့ပြီး ဖြစ်လေတော့သည်။ ဒါန မပါဘဲ သံသရာခရီး သွားရလျှင် သုဂတိ ဘ၀ကောင်းကို ရရန်ခက်၏ ။ သုဂတိဘ၀ကို ရပြန်လျှင်လည်း ဘောမသမ္ပတ္တိပြည့်စုံဖို့ရန် ခက်ခဲပြန်၏ ၊ ထိုအခါ ကုသိုလ်တရားကို ရှာဖွေပြုလုပ် ချင်သော်လည်း ရှာ ဖွေပြု လုပ်နိုင်တော့မည်မဟုတ်ပေ။ သံသရာ ခရီးသွားမရပ်စဲသေးသော သူများမှာ ဒါန တရားကို အထူး အားထုတ်ဖို့ အရေးကြီး လှပေသည်။
သာမန်အလှူရှင် တို့သည် အလှူခံပုဂ္ဂိုလ်ကို အယုတ် အလတ် အမြတ် ရွေးချယ်၍ ‘ဤကောင်းမှုမြတ်ဒါနကြောင့် လူ့ဘ၀ နတ်ဘ၀ ရောက်ရှိပြီး လူ့စည်းစိမ် နတ်စည်းစိမ် ခံစား စံစားရပါလို၏’ ဟု ဋနိဿိတ ဒါနမျိုးကို ပြုတတ် ကြ၏ ။ ဘုရားလောင်းတော်ကြီး များမှာမှု အလှူခံကိုလည်း မရွေးချယ်၊ သဗ္ဗညုတဉာဏ်တော် ရဖို့ရန်သာ ရည် ရွယ်ရင်းရှိတော် မူကြပေသည်။
ဘုရားလောင်းတော်သည် ဒါနပါရမီကို ဖြည့်ကျင့်ရန် သုမေဓာရသေ့ ဘ၀က အဓိဋ္ဌာန်တော် မူခဲ့သည့်အတိုင်း လေးအသင်္ချေနှင့် ကမ္ဘာတစ်သ်ိန်း ကာလအတွင်း ဖြစ်လေရာ ဘ၀တို့၌ ထီးနန်းစည်းစိမ် ဥစ္စာပစ္စည်း ရွှေ ငွေ စသည့် သက်မဲ့ဝတ္ထု ပစ္စည်းများအပြင် ဇနီး မယား သမီး သားနှင့် အင်္ဂါခြေလက် အသက်တို့ကို စွန့်လှူတော် မူခဲ့လေသည်။
သီလပါရမီ၌ သီလသဒ္ဒါသည် ကောင်းသောအကျင့်၊ ကောင်းစွာထားရှိခြင်း၊ ကောင်းစွာ ဆောင်ရွက် ခြင်းဟူသော အဓိပ္ပါယ်ကို ဟောဆို၏ ။ သီလစောင့်ထိန်းသူ သန္တာန်၌ ကာယကံမှု ၀စီကံမှုတို့သည် အထိန်း မရှိသော ချည်ခင်ပမာ ဖြစ်လိုရာ ဖရိုဖရဲ မဖြစ်ပေါ်တော့ပေ၊ ကုသိုလ် ဟူသမျှသည်လည်း သီလနှင့်ကင်း၍ ကောင်းစွာ မဖြစ်နိုင်ပေ၊ သီလရှိသူ သန္တာန်မှာသာ ကုသိုလ်တရားတို့ ဖြစ်ပွားနိုင်လေသည်။ သို့ဖြစ်၍ ကာယ ကံ မှု ၀စီကံမှုတို့ကို ရုန့်ရင်းကြမ်းတမ်းစွာ ဖြစ်ခွင့်မပေးဘဲ သိမ်မွေ့ နူးညံ့အောင် ကောင်းစွာ ထား တတ် သော ကြောင့်လည်းကောင်း၊ ကုသိုလ်တရားများ အဆင့်ဆင့်ဖြစ်ပွားအောင် အခြေခံ အကြောင်းရင်း အဖြစ်ဖြင့် ကောင်းစွာ ရွက်ဆောင်တတ် သောကြောင့် လည်းကောင်း သီလ ဟုခေါ်ဆိုရလေသည်။
ဘုရားလောင်းတော်သည် သီလပါရမီကို ဖြည့်ကျင့်ရန် သုမေဓာရှင်ရသေ့ဘ၀က အဓိဋ္ဌာန် တော်မှုခဲ့သည့် အတိုင်း လေးအသင်္ချေနှင့် ကမ္ဘာတစ်သိန်း ကာလအတွင်း ငါးပါးသီလ၊ ရှစ်ပါးသီလ စသည်ဖြင့် သီလ ပါရမီ ကိုဖြည့်ကျင့်တော်မှုခဲ့သည်။ စာမရီ သားကောင်သည် မိမိ၏ မြီးဆံကို အသက်နှင့်လဲ၍ စောင့်ရှောက်သကဲ့သို့ လည်းကောင်း၊ ယစ်မသည် မိမိ၏ဥကို အသက်နှင့်လဲ၍ စောင့်ရှောက်သကဲ့သို့ လည်းကောင်း ဘုရားအ လောင်းတော်သည်လည်း မိမိ၏ သီလကို အသက်နှင့်လဲ၍ပင် ဖြည့်ကျင့်တော်မှုခဲ့လေသည်။
နေက္ခမ္မပါရမီ၌ နေက္ခမ္မသဒ္ဒါသည် ထွက်မြောက်ခြင်းဟူသော အနက်ကိုဟော၏ ။ ထွက်မြောက်ခြင်း ဟူသည် သံသရာမှ ထွက်မြောက်ခြင်း၊ ကာမ(နှစ်သက်ဖွယ်ရာ အာရုံငါးပါး ကာမဂုဏ်တရား)မှ ထွက်မြောက်ခြင်း ဟူ၍ နှစ်မျိုးရှိ၏ ၊ သံသရာမှ ထွက်မြောက်ခြင်းမှာ အကျိုးဖြစ်၍ ကာမ မှထွက်မြောက်ခြင်းမှာ အကြောင်းဖြစ်သည်။ ကာမမှ ထွက်မြောက်အောင် ဖြည့်ကျင့်နိုင်မှ သံသရာမှ ထွက်မြောက်နိုင်မည်။
ကာမသည် ကိလေသကာမနှင့် ၀ထ္ထုကာမဟူ၍ နှစ်ပါးရှိသည်၊ နှစ်သက်ဖွယ်သော အာရုံကို လိုချင် မက် မော တတ်သော လောဘကိလေသာကို ကိလေသာကာမဟုခေါ်သည်၊ မက်မောတွယ်တာဖွယ်ရာ အရာဝတ္ထု အစုစုကို ၀တ္ထုကာမ ဟုခေါ်သည်၊ ထိုကာမနှစ်မျိုးမှ ကင်းလွတ်အောင် အားထုတ်ကြိုးပမ်းခြင်းကို နေက္ခမ္မ ပါရမီ ဟုခေါ်သည်။
နေက္ခမ္မပါရမီ ဖြည့်ကျင့်ရန် အတွက် အခြေခံအကြောင်းရင်းမှာ တောထွက်၍ ရသေ့ရဟန်း ပြုလုပ်ခြင်းပင်ဖြစ်၏ ။ ဘုရားအလောင်းတော်သည် လေးအသင်္ချေနှင့် ကမ္ဘာတစ်သိန်း ကာလအတွင်း နေက္ခမ္မပါရမီကို ဘ၀ပေါင်း များစွာ ဖြည့်ကျင့်ခဲ့လေသည်။
လက်မှု စက်မှု တွေးခေါ်သိမြင်မှု စသော ၀ိဇ္ဇာ သိပ္ပ အတတ်ပညာ ဟူသမျှကို သိမြင်နိုင်ခြင်း၊ လူတို့၏ ကောင်း ကျိုး ကို ဆောင်နိုင်သော အတတ်ပညာ အသိပညာ အားလုံးကို တတ်ကျွမ်း နားလည်ခြင်းနှင့် အကြောင်း အကျိုးကို ဆက်စပ်မြော်မြင်နိုင်ခြင်းသည် ပညာဖြစ်သည်။
ပညာရှိတို့ထံ အဖန်ဖန် မေးမြန်းခြင်း စသည်ဖြင့် ပညာတိုးပွားခြင်းအကြောင်း ခုနစ်မျိုး
(၁) ပညာရှိတို့ထံ အဖန်ဖန် မေးမြန်းခြင်း၊
(၂) ကိုယ်တွင်း ကိုယ်ပ သန့်ရှင်းစင်ကြယ်အောင် ပြုလုပ်ခြင်း၊
(၃) သဒ္ဒါ ၀ီရိယ စသည်တို့ကို ညီမျှ နေစေရခြင်း၊
(၄) ပညာမဲ့သူတို့ကို ရှောင်ရခြင်း၊
(၅) ပညာရှိတို့ကို ပေါင်းသင်းရခြင်း၊
(၆) ခက်ခဲသော သဘောတရားများကို တွေးတော စဉ်းစားရခြင်း၊
(၇) လျောင်း ထိုင် ရပ် သွား အမြဲတမ်းအားဖြင့် ပညာပွားရန် ရည်သန်နေရခြင်း တို့ဖြစ်ကြသည်။
ထိုထို ကိစ္စတို့၌ပညာတရားသည် ရှေ့ဆောင်ဦစီးအကြီးအမှူး အဖြစ်ဖြင့် ဖြစ်သောအခါ ၀ီမံသာ ဓိပတိဟူ၍ ခေါ် ၏ ။ ထိုပညာသည် သူတမယပညာ စိန္တမယပညာ ဘာဝနာမယပညာ ဟူ၍ပညာသုံးမျိုးရှိသည်။ ကြားနာရ၍ ဖြစ်ပေါ်လာသောပညာ၊ ကြံစည်သဖြင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော ပညာ၊ ဈာန်ဝင်စားခိုက် ဖိုလ်ဝင်စားခိုက်တို့၌ ဖြစ် ပေါ် လာသော ပညာတို့ဖြစ်ကြသည်။ အလောင်းတော်သည် သုတမယပညာ စိန္တာမယပညာ တို့ကို အရင်းခံထား၍ လောကီဈာန်အသိဉာဏ်နှင့်တကွ သင်္ခါရုပေက္ခာ ၀ိပသာနာဉာဏ်တိုင် အောင်သော လောကီ ဘာဝနာမယ ပညာ တို့ကို ရှာမှီးခဲ့လေသည်။ ထိုပညာဖြင့် သတ္တ၀ါတို့၏ ကောင်းကျိုးကို ဆောင်တော်မူခဲ့သည်။
ဘုရားအလောင်းတော်သည် ပါရမီ ဖြည့်ကျင့်ရာ၌ အရေ အကြော အရိုး မျှသာ ကြွင်းကျန်ပြီး၊ အသား အသွေး တွေ အားလုံး ခန်းခြောက်သွားပါစေ၊ ၀ီရိယကို လျှော့ချရိုးမရှိ၊ ဇွဲလုံ့လအပြည့်ဖြင့် ကြိုးစားဖြည့်ကျင့် တော် မူခဲ့ သည်။
ရည်မှည်းချက် ကိစ္စတစ်ရပ် ပြီးမြောက်ရေးအတွက် မည်သည့် အခက်အခဲမျိုးနှင့် ရင်ဆိုင်ရစေကာမူ နောက် မ တွန့်၊ အခက်အခဲ အဟန့်အတားများကို ကြိုးစားကျော်ဖြတ်ပြီး ပန်းတိုင်သို့ မရောက်ရောက်အောင် ချီတက် ကြိုပမ်းမှုသည် ၀ီရိယဖြစ်သည်။ ဇွဲလုံ့လ ၀ီရိယကို အလျှော့မပေးဘဲ မနေမနား ကြိုးစား အားထုတ်ခြင်းသည် ၀ီရိယ ပါရမီ ဖြည့်ကျင့်မှုဖြစ်သည်။ ကောင်းမြတ် မှန်ကန်၍ စွဲမြဲပြင်းထန်စွာ အားထုတ်သော ၀ီရိယကို သမ္မာဝါ ယာမ ဟုခေါ်သည်။ ၀ီရိယ ပါရမီဖြည့်ရာ၌ သမ္မာဝါယာမကိုသာ ဆည်းပူး ပွားများအားထုတ်လျက် ပြည့်ဝအောင် ဖြည့်ကျင့်ရသည်။ မဖြစ်သေးသော ကုသိုလ် အသစ်များဖြစ်ရန် ဖြစ်ပြီးသော အကုသိုလ် အဟောင်းများကို ပယ် ရန် အားထုတ်မှု စသော သမ္မပ္ပဓာန်သည် ၀ီရိယာ ဓိပတိပင် ဖြစ်သည်။
ဘုရားအလောင်းတော်သည် ၀ီရိယပါရမီတော်ကို ဖြည့်ကျင့်ရာ၌ သားကောင်ဖမ်းသော ခြင်္သေ့မင်းပမာ လုပ် ငန်းကိစ္စ ကြီးသည် ငယ်သည် သဘောမထား၊ မည်သည့်အခါမျှ ၀ီရိယကို လျှော့လေ့မရှိ။ ဖြစ်လေရာဘ၀တို့၌ တွေ့ကြုံလာသော မိမိသူတပါးအရေးကိစ္စ မှန်သမျှတို့ကို မည်သည့်နည်းနှင့်မျှ နောက်မဆုတ်ဘဲ ရဲရဲဝံ့ဝံ့ ရွက် ဆောင် အားထုတ်တော်မှုခဲ့လေသည်။
ခန္တီဟူသည် သည်းခံခွင့်လွှတ် မှုဖြစ်သည်၊ ချမ်းသာသုခနှင့် ကြုံတွေ့သော်လည်း စိတ် တက်ကြွ မှုမရှိ၊ ဒုက္ခ နှင့် ရင်ဆိုင်ရသော်လည်း စိတ်မပျက်၊ အမျက်မထန်၊ သည်းခံခြင်း နှလုံးခိုင်ခံခြင်း ကို ခန္တီ ဟုခေါ်သည်။ ခန္တီ သဘောမှာ အဒေါသဖြစ်သည်။ သည်းခံလိုက်ရသဖြင့် စိတ်ဆိုးမှု ပူပန်မှု အားငယ်မှု မဖြစ်ပေ၊ သည်းခံခြင်းထက် မြင့်မြတ်သော ကျင့်စဉ်မရှိပေ။ သည်းခံခြင်းသည် အမြင့်မြတ် ဆုံးသော အကျင့်ဖြစ်သည်။ သည်းခံခြင်းသည် အငြိမ်း ချမ်း ဆုံးသော အောင်မြင်မှုကို ပေးစွမ်နိုင်သည်။ ဤနည်းအားဖြင့် ဘုရားအလောင်းတော်သည် ခန္တီ ပါရမီကို ဖြည့်ကျင့်တော်မှုခဲ့ပေသည်။
မဟုတ်မမှန်သော စကားကို ပြောဆိုမှုမှ ရှောင်ကြဉ်၍ မှန်ကန်ဖြောင့်မတ်စွာ ပြောဆိုခြင်းသည် သစ္စပါရမီ မည် ၏ ၊ သစ္စာ၏ ပဓာနလက္ခဏာမှာ အမှန်အကန်ပြောဆိုမှု ၀စီသစ္စာ ဖြစ်သည်။ သစ္စာပါရမီသည် အခြား ပါရမီ တို့ ထက် ထူးခြားမှုရှိ၏ ၊ သစ္စာပါရမီတော်၌ မိမိပြုအပ်သော သစ္စာစကားဖြင့် လိုအပ်သော အရာကို တောင့်တ လျှင် ခဏချင်းပြည့်စုံစေ နိုင်သော သတ္တိထူးရှိ၏ ။
ဘုရားအလောင်းတော်တို့သည် ဖြစ်လေရာရာ ဘ၀တိုင်း သစ္စပါရမီကို အသက်စွန့်၍ ဖြည့်ကျင့်ကြ၏ ၊ မုသာဝါ ဒကို လုံးဝ ရှောင်ကြဉ်ကြ၏ ။ မဟာသူတသောမဇာတ်၌ ‘‘မြေပြင်တစ်ဝန်း၌ အလုံးစုံသော အရသာမျိုးတို့ ရှိကြ ရာ ထိုအရသာတို့တွင် သစ္စာသည်သာလျှင် အချိုမြိန်ဆုံး အရသာဖြစ်ပေ၏’’ ဟူ၍ ဟောဆိုထားတော်မှု၏ ။ ‘ကတိသစ္စာ၊ တည်သောခါဝယ်၊ သြဇာလေးနက်၊ ပေါ်ဆီတက်၍၊ နွယ်မြက်သစ်ပင်၊ ဆေးဖက်ဝင်၏’ ဟူ၍လည်း ဖွဲ့ဆိုကြ၏ ။
သစ္စာတရား ထွန်းကားရာခေတ်၌ သစ္စာစကားသည် အလိုရှိရာ ကောင်းကျိုးကို ချက်ချင်းပေးနိုင်၏ ။ မုသာဝါဒ ထွန်းကားရာ ခေတ်ကာလ၌ သစ္စာစကားတို့လည်း ချက်ချင်း အစွမ်းမပြနိုင် ၊ မုသာဝါဒ အကုသိုလ် တရား တို့လည်း ချက်ချင်း အစွမ်းမပြနိုင်တော့ပေ။
မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ ဘုရားအလောင်းတော်ကား လေးအသင်္ချေနှင့် ကမ္ဘာတစ်သိန်း ကာလအတွင်း ဘ၀ပေါင်းများ စွာ၌ သစ္စာပါရမီကို ဖြည့်ကျင့်တော်မှုခဲ့လေသည်။
အဓိဋ္ဌာန်ပါရမီဟူသည် မည်သည့်ကိစ္စ၊ မည်သည့်အခြေအနေ၊ မည်သည့်အနှောက်အယှက် အဟန့်အတား အခက် အခဲ နှင့် ရင်ဆိုင်ရသည်ဖြစ်စေ မိမိရည်ရွယ်အပ်သည့် အလုပ်ကိစ္စကို မရွေ့မရှား မတုန်မလှုပ် ကြံ့ကြံ့ တည်လျက် ပြီးမြောက်အောင် ဆောင်ရွက်ဖြင့်ဖြစ်သည်။ အဓိဋ္ဌာန်ပြုရာ၌ ကြံ့ချိုကဲ့သို့ ကျင့်ရသည်။ ကြံ့ချို ဟူသည် တစ်ချောင်းတည်းသာရှိ၏ ၊ နှစ်ချောင်းမရှိ။ အဓိဋ္ဌာန်ဟူသည်လည်း အဓိဋ္ဌာန်သည့်အတိုင်း အတည် သာဖြစ်ရမည်၊ နှစ်ခွမရှိရ၊ နှစ်မျိုးမရှိ ၊အလုပ်ကိစ္စ မပြီးစီးသည် မရှိရ၊ မြဲမြဲမြံမြံ သေသေချာချာ ကျင့်ကြံရမည်ဟု ဆိုလိုသည်။
‘သစ္စာဓိဋ္ဌာန်ပြုကြပါသည်’ဟု တွဲ၍ သုံးရိုးစဉ်လာ ရှိနေသော်လည်း သစ္စာနှင့်အဓိဋ္ဌာန်သည် အခြားစီဖြစ်သည်။ ကောင်းသည်ဖြစ်စေ၊ ဆိုးသည်ဖြစ်စေ မှန်ကန်ခြင်းသဘောကို အခြေခံပြုပြီး လိုအပ်သော အရာကို တောင့် တ မြွက်ဆို ခြင်းသည် သစ္စာမည်၏ ။ မိမိစိတ်ဆုံးဖြတ် ရည်မှန်းထားသည့်အတိုင်း ပြီးမြောက်အောင် ဆောင် ရွက်ခြင်းသည် အဓိဋ္ဌာန်မည်၏ ။
ဘုရားအလောင်းတော်သည် ဒါနစသော ပါရမီအကျင့်များကို ကျင့်ရာ၌ ကြိုတင်အဓိဋ္ဌာန်ပြုပြီးမှ ထိုအဓိဋ္ဌာန် ချက်အတိုင်း စိတ်ဆုံးဖြတ်ထား သည့်အတိုင်း ကိစ္စတစ်ခုကို ပြည့်စုံပြီးမြောက်အောင် အားထုတ်လေသည်။
သူတပါးတို့၏ အကျိုးစီးပွားဖြစ်ထွန်းမှုကို လိုလားခြင်းသည် မေတ္တာမည်၏ ။ လင်ချစ် မယားချစ် (တဏှာပေမ)၊ သားချစ် သမီးချစ် (ဂေဟဿိတပေမ) တို့ကဲ့သို့ တဏှာလောဘပါသော အချစ်မျိုးမဟုတ်။ မေတ္တာတရားသည် စင်ကြယ်မွန်မြတ်သော အဒေါသ သဘောတရားသာဖြစ်၍ ဗြသ္ဓ၀ိဟာရဟူသော အမည်ကိုလည်း ရ၏ ။ ဤ တရားကို ပွားများနေလျှင် မြတ်သောနေခြင်းဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ဘုရားအလောင်းတော်သည် မေတ္တာဖြင့် နေခြင်းဖြင့် လေးအသင်္ချေနှင့် ကမ္ဘာတစ်သိန်းကာလ အတွင်းဘ၀ပေါင်း များစွာတို့၌ မေတ္တာပါရမီကို အစွမ်းကုန် ဖြည့်ကျင့် တော်မှုခဲ့လေသည်။
ဥပေက္ခာ ဟူသော စကား၏အဓိပ္ပာယ်မှာ အညီအမျှရှုခြင်းဖြစ်သည်။ဆင်းရဲမှု ချမ်းသာမှုနှစ်မျိုးတွင် မည်သည့် ဘက် သို့မျှ တစ်ဘက်သတ် မလိုက်ဘဲ အညီအမျှ ရှုခြင်းဖြစ်သည်။ ဥပေက္ခာ ပါရမီသည် ချစ်ခြင်း မုန်းခြင်း ဟူသည့် အစွန်းနှစ်မျိုးသို့ မကပ်ရောက်ဘဲ လက်မလိုက် တည့်မတ်သောစိတ်ဖြင့် ဖြည့်ကျင့်ရသော ပါရမီ ဖြစ်သည်။
ဘုရားအလောင်းတော်သည် မိမိအပေါ် ရောက်ရှိလာသော ချမ်းသာဆင်းရဲ၊ ချစ်ခြင်း မုန်းခြင်းများကို ချိန်ခွင် လျှာသဖွယ် မစောင်းမငဲ့ အမှန်တည့်တည့် ရပ်တည်ခြင်းဖြင့် ဥပေက္ခာပါရမီကို ဖြည့်ကျင့်တော်မှုခဲ့လေသည်။
ပါရမီဆယ်ပါး အပြားသုံးဆယ်တို့ကို ဖြည့်ကျင့်ရာ၌ ဘုရားအလောင်းတော်သည် ပါရမီတစ်ပါးလျှင် တစ်ဘ၀နှုန်းဖြင့် ဖြည့်ကျင့်သည်မဟုတ်ပေ၊ ဖြစ်လေရာရာ ဘ၀တိုင်းတို့၌ ဒါန သီလ နေက္ခမ္မ ပညာ ၀ီရနယ စသော ပါရမီဆယ်ပါး ကို ရနိုင်သလောက် ဖြည့်ကျင့်ခဲ့သည်။ တချို့သောဘ၀ တချို့သောကာလတွင် ပါရမီ မြောက် ဖြည့်ကျင့်ခဲ့သလို တချို့သောဘ၀တွင် ဥပပါရမီမြောက်၊ တချို့သောဘ၀တွင် ပရမတ္ထပါရမီမြောက် ဖြည့် ကျင့်ခဲ့သည်။
ဒါန ပါရမီကိုပင် သူမတူအောင် စွန့်လွတ် နိုင်ခဲ့သဖြင့် ပဉ္စမဟာပရိစ္စာဂ (စွန့်ခြင်းကြီး ငါးပါး) ဟု ၀ိသေသတပ်၍ အမြတ်တနိုး ခေါ်ခဲ့ကြသည်။ ပါရမီများကို ဖြည့်ကျင့်ရာတွင် စရိယာ သုံးပါးခေါ် ကျင့်စဉ်သုံးပါးကို ဖြည့် ကျင့် ခဲ့သည်။
- သတ္တ၀ါအားလုံး ကောင်းစားရေး
- မိမိမျိုးနွယ်တစ်ရပ်လုံး ကောင်းစားရေး
- သဗ္ဗညုတဉာဏ်တော်ကို ရရှိရေး -
ဟူသော ပဓာနရည်မှန်းချက်ကြီးများ ပြည့်ဝအောင် အသက်ကိုပင် စွန့်၍ဖြည့်ကျင့် ခဲ့ရလေသည်။
ဤသို့လျှင် သုမေဓာရှင်ရသေ့ ဘ၀ ဗျာဒိတ်ရချိန်မှစ၍ လေးအသင်္ချေနှင့် ကမ္ဘာတစ်သိန်းတိုင်အောင် ဘ၀များ စွာအနစ်နာခံလျက် ပါရမီ ဆယ်တန်တို့ကို ကျင့်ကြံဖြည့်ဆည်း တော်မှုခဲ့သဖြင့် နောက်ဆုံးဘ၀၀ယ် သဗ္ဗညုတ ဥာဏ်တော်ကြီးကို ဆရာမရှိ မိမိကိုယ်တော်တိုင် ရရှိပိုင်ဆိုင်တော်မှုခဲ့လေသည်။
ဘုရားအလောင်းတော်သည် ဒါန စသော ပါရမီတရားများကို လေးအသင်္ချေနှင့် ကမ္ဘာတစ်သိန်းကာလ ပတ်လုံး ဘ၀ ဆက်တိုင်း ဖြည့်ကျင့်တော်မှုရာ၌ အခြားတပါးသူတို့ ကြံတွေးရုံမျှ ကြက်သီထလောက်အောင် လွန်စွာ အနစ်နာခံ မှုတို့ကို ပြုလုပ်ခဲ့ရသည်။ ထိုသို့စွန်လွတ်မှု အနစ်နာ ခံမှုများကို မြင့်မြတ်သော စိတ်ထားဖြင့် စွန့် လွတ်ဖြည့်ကျင့် ခဲ့သဖြင့် ပဉ္စမဟာပရိစစ္စာဂ=စွန့်ခြင်းကြီးငါးပါး ဟူ၍ ဂုဏ်ပြုခေါ်ဝေါ်ခဲ့ကြသည်။ စွန့်ခြင်းကြီး ငါးပါး ကိုစွန့်ကာ သူမတူအောင် ဖြည့်ကျင့်ကြိုးပမ်းခဲ့သည်မှာ သဗ္ဗညုတ ဥာဏ်တော်မြတ်ကို ရရှိ ရေး အတွက်သာ ဖြစ်သည်။ ထိုဥာဏ်တော်မြတ်ကို ရယူလိုသည့် ရည်ရွယ်ချက်မှာလည်းသတ္တ၀ါ အများကို သံသရာဝဋ်ဆင်းရဲ အပေါင်းမှ ကယ်တင်တော်မှုလိုသော အာသီသဆန္ဒ ကြောင့်သာ ဖြစ်ပေသည်။ ထို့ကြောင့် ဤ စွန့်လွတ် အနစ်နာခံမှုများကို မဟာပရိစ္စာဂ မြင့်မြတ်သော ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် မြင့်မြတ်သောသူတို့သာ ပြုလုပ် နိုင်စွမ်းသော မြင့်မား ခက်ခဲ သည့် စွန့်လွတ်ခြင်းကြီးများဟု အမည်သမုတ်ခဲ့ကြပေသည်။ထိုစွန့်ခြင်းကြီး ငါးပါးတို့မှာ -
(၁) ဓနပရိစ္စာဂ - ရွှေ ငွေ ဘဏ္ဍာ ရတနာပစ္စည်းများနှင့် တိုင်းပြည် နိုင်ငံထီးနန်း စည်းစိမ် ကိုစွန့်လှူ၍ ပါရမီဖြည့်ခြင်း။
(၂) ပုတ္တပရိစ္စာဂ - သားသမီး ရတနာများကို စွန့်လှူ၍ ပါရမီ ဖြည်းခြင်း။
(၃) ဘရိယပရိစ္စာဂ - ဇနီးမယားကို စွန့်လှူ၍ ပါရမီဖြည့်ခြင်း။
(၄) အင်္ဂပရိစ္စာဂ - မျက်စိ နား နှာ ကိုယ်အင်္ဂါ အစိတ်အပိုင်း တို့ကို စွန့်လှူ၍ ပါရမီဖြည့်ခြင်း။
(၅) ဇီဝိတပရိစ္စာဂ - မိမိအသက်ကိုပင် နှမြောတွန့်တိုမှု အရှိဘဲ စွန့်လွှတ် စွန့်လှူ အနစ်နာခံကာ ပါရမီဖြည့်ကျင့်ခြင်း- တို့ဖြစ်သည်။
ထိုစွန့်ခြင်းကြီး ငါးပါးတို့သည် တစ်မျိုးထက် တစ်မျိုးက ပို၍ ခက်ခဲသည်။ မိမိကိုယ်တိုင် အပတ်တကုတ် နေပူ မိုးရွာ မရှောင် နေ့ညမဟူ ချမ်းသာဆင်းရဲမျိုးစုံ ဆင်နွဲကာ ရှာဖွေထားသော ပစ္စည်းဥစ္စာ ရတနာတို့ကို ပကတိဖြူစင် ကြည်လင်သော စိတ်ထားဖြင့် စွန့်လှူမှုသည် လူတိုင်းပြုနိုင်သော အမှုကိစ္စ မဟုတ်ပေ။ မိမိ လက်ဝယ် ရောက် ရှိ ပိုင်ဆိုင်လာသော တိုင်းပြည် နိုင်ငံထီနန်း စည်းစိမ်တို့ကို စွန့်လွှတ်လှူဒါန်း နိုင်မှုသည်လည်း လွန် စွာခက်ခဲသော ကိစ္စမျိုးပင် ဖြစ်ပေသည်။ သို့သော် ဘုရားအလောင်းတော် တို့မှာမှု မိမိပိုင်ဆိုင်သော ထီး နန်း စည်းစိမ်ကိုပင် လိုချင်သူ ပေါ်ပေါက်လာပါက စိတ်ရင်းဖြူစင်စွာ ပေးလှူခဲ့ကြသည်မှာ ဘ၀များစွာ အကြိမ် များစွာပင် ဖြစ်လေသည်။ မဟာသီလ၀ဘုရင် မင်းကြီးဘ၀တွင် မိမိနိုင်ငံကို လိုချင်သော ကောသလ မင်းကြီး အား အသာတကြည်ပင် ပေးလှူ၍ ပါရမီဖြည့်ခဲ့လေသည်။
ဥစ္စာပစ္စည်း စွန့်လှူမှု၊ တိုင်းပြည်နိုင်ငံ စွန့်လှူမ၍မျိုးထက် သားသမီးများကို လှူဒါန်းနိုင်မှု မှာ ပို၍ ခက်ခဲပေသည်။ အရေထူလွန်မြောက် အရေပါးဖောက်၍ ရိုးတွင်းချဉ်ဆီ ရောက်အောင် အသည်းခိုက်မျှ ချစ်ခင် ယုယ ကြင်နာ ခဲ့ရသည့် မိမိရင်နှစ်သည်းချာ သားသမီးရတနာတို့ကို လူတိုင်းချစ်မြတ်နိုး ကြပေသည်။ ဘုရားအ လောင်းတော်တို့လည်း လူသားသဘာဝ ချစ်မြတ်နိုးကြသည်ပင်။ သို့သော်လည်း သဗ္ဗညုတဥာဏ်တော်မြတ်ကို ရယူလိုမှုက ပိုမိုပြင်းထန်လှသဖြင့် ပါရမီဖြည့်ဘက် သားသမီးတို့ကို လိုလားသူ အလှူခံ ပေါ်ပေါက်ပါက လှူဒါန်း ခဲ့ကြသည်မှာ ဘ၀များစွာရှိခဲ့သည်။ ဝေဿန္တရာမင်းကြီး ဘ၀တွင်အလှူခံလာသူ ဇူဇကာပုဏ္ဏားအား သားတော် သမီးတော်များ ဖြစ်ကြသော ဇာလီနှင့်ကဏှာဇိန် တို့ကို ပေးလှူခဲ့သည်။ ဇူဇကာပုဏ္ဏားက မိမိရင်းသွေးတို့ကို မိမိမျက်မှောက်မှာပင် ကြိုးနှင့်တုပ် တုတ်နှင့်ရိုက် ကြိမ်းမောင်း ဆဲဆိုပြီး လိုရာသို့ခေါ်ဆောင်သွားပုံကို မြင် ရသော ဘုရားအလောင်းတော် ဝေဿန္တရာမင်းအဖို့ စိတ်မသက်သာ ပင်ပန်းနာကျင်ခဲ့ရသည်။ သို့သော်လည်း သဗ္ဗညုတဉာဏ်တော်ကို လိုလားမှုက ပြင်းပြလှသဖြင့် သားသမီးတို့ကို စွန့်လှူကာ ပါရမီဖြည့်ခဲ့ရပါသည်။
ဘရိယပရိစ္စာဂမှာ ဇနီးမယားကို စွန့်လွှတ်လှူဒါန်းမှုဖြစ်သည်။ ဘ၀ကြင်ဖော်အဖြစ် လက်တွဲ၍ ချမ်းသာဆင်းရဲ မခွဲအတူ ကြည်ဖြုမြတ်နိုး လှသော မိမိ၏ဇနီးကို စွန့်လွှတ်ခြင်းသည်ကား ကြီးမားလွန်းလှသော စွန့် လွှတ်မှုမျိုးဖြစ်သည်။ လူတို့သဘာဝအရ မိမိ၏ အိမ်သူသက်ထားကို သူတစ်ပါး စေ့စေ့ကြည့်တောင် ခံ လိုသောစိတ်မရှိ။ ဘုရားအလောင်းတောင်သည် လူထဲက လူတစ်ဦးသာ ဖြစ်သဖြင့် မိမိဇနီးကို ချစ် ခင် လှ သည်။ သို့သော်လည်း ပါရမီမျိုးစေ့ဟူသမျှ အနည်းငယ်မျှ အကျန်ရအောင် ဖြည့်ကျင့်နေသော ဘုရား အလောင်းတော်အဖို့ သဗ္ဗညုတဥာဏ်တော်မြတ်ကို ရရှိရေးသည်သာ ပဓာနဖြစ်သဖြင့် ချစ်လှစွာသော ဇနီးမယားတို့ကို စွန့်လွှတ် လှူဒါန်းခဲ့သည့် အကြိမ်ပေါင်းမှာ များလှချေပြီ။ ဝေဿန္တရာမင်းမြတ်သည် မဒ္ဒီမိဖုရားကို ပုဏ္ဏားအို အယောင်ဆောင်လာသူ သိကြားမင်းအား တွန့်တို ဆုတ်နစ်မှုမရှိ လှူဒါန်းခဲ့သည်။
အထက်ပါ စွန့်ခြင်းကြီးသုံးမျိုးမှာ ပြုလုပ်ရန် လွန်စွာခဲယဉ်းလှပါသည်။ သို့သော်လည်း မိမိကိုယ်ခန္ဓာနှင့် မစပ်သော ပြင်ပအရာ များသာဖြစ်၍ လှူနိုင်ကောင်း လှူနိုင်ဦးမည်။ မိမိကိုယ်ခန္ဓာ အစိတ်အပိုင်းတို့ကို တစ်ပိုင်းစီ ဖြုတ်ဖြတ်၍ စွန့်လွှတ်လှူဒါန်းမှုမှာ ပို၍ ခက်ခဲလှပါ သည်။ လူတိုင်းလူတိုင်းပင် မိမိကိုယ်ခန္ဓာ အားအင်ပြည့်ဝ လှပစေရန် စီမံအားထုတ်မြဲ ဖြစ်သည်။ လူတိုင်းပင် မိမိတို့ ကိုယ်ခန္ဓာကို တွယ်တာ မြတ်နိုးကြမြဲ ဖြစ်သည်။ ဘ၀တစ်သက်တာတွင် အတွယ်တာဆုံး အမြတ်နိုးဆုံးအရာသည် မိမိတို့ကိုယ်ခန္ဓာ ပင်ဖြစ်သည်။ ထိုမျှ ချစ်ခင်မြတ်နိုးလှပါသော ခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှ မျက်စိကို ထုတ်၍ လှူခြင်း၊ နားကိုဖြတ်၍ လှူခြင်း၊ ခြေလက်အင်္ဂါဖြတ်၍ လှူခြင်းမျိုးကား မိမိစွန့်လွှတ်မှုကြောင့် တစ်ဖက်သား အကျိုးရှိမည်ဆိုလျှင်ဖြစ်စေ၊ အခြားသူတစ်ဦးဦးက မိမိခန္ဓာကိုယ် အစိတ်အပိုင်း တစ်ခုခုကို လိုချင်ပါသည်ဟု အလှူခံလာလျှင်ဖြစ်စေ နှမြောတွန့်တို ခြင်းမရှိ၊ ကြောက်စိတ်မ၀င်၊ ရွှင်ကြည် ၀မ်းမြောက်စွာ လှူဒါန်းခဲ့သည်မှာ ဘ၀များစွာပင် ရှိခဲ့ပြီ။ သဗ္ဗုညုတဥာဏ်တော်ကိုသာ ရမည်ဆိုပါက စွန့်လွှတ်မည်သာဖြစ်သည်။ အလောင်းတော် သိဝိမင်းဘ၀ တွင်မျက်စိနှစ်ကွင်းကိုထုတ်၍ လှူဒါန်းခဲ့သည်။ အလောင်းတော်မျောက်မင်း ဘ၀တွင် မိမိခါးတွင် နွယ်ကြိုးချည်၍ မျောက်အပေါင်းကို ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှ ဖြတ်လျှောက်စေကာ ကိုယ်ခန္ဓာကို စွန့်လွှတ်၍ ပါရမီဖြည့်ခဲ့သည်။
စွန့်ခြင်းကြီးငါးပါးတွင် အခက်ခဲဆုံးကား အသက်ကို စွန့်လွှတ်၍ ပါရမီဖြည့်မှု ဇီဝိတပရိစ္စာဂ ပင်ဖြစ်သည်။ ပြင်ပဥစ္စာ သားသမီး ဇနီးမယားတို့ကို စွန့်လွှတ်စဉ် အခါတုန်းက‘‘မိမိကိုယ်တိုင် မဟုတ်၍ စွန့်လှူနိုင်ခြင်း ဖြစ်သည်။ ဘုရားအလောင်းတော်တို့သည် မိမိ သဗ္ဗညုဥာဏ် ရရှိရေး အတွက် မိမိကို မှီခို အားထားနေကြသည့် သားသမီး ဇနီးမယားတို့ကို ရက်ရက်ရောရော စွန့်လှူခဲ့ကြသည်။ ထိုသို့ စွန့်လွှတ်မှုကို မိမိကိုယ်ကျိုးအတွက် ပြုလုပ်သည်’’ ဟုထင်မြင်ကောင်း ထင်မြင်စရာရှိသော်လည်း မိမိ၏ ကိုယ်ခန္ဓာ အသက်ကိုပင် မြက်တစ်ပင်မျှ ပမာမထား စွန့်လွှတ်စွန့်စား သည်ကို ကြည့်လျှင် ထိုထင်မြင်မှုများ ယုတ္တိမရှိကြောင်း သိသာလှ၏ ။ အလောင်းတော်မြတ်တို့၏ စိတ်အစဉ်ဝယ် တွယ်ကပ် စွဲလမ်းနေသည့်အရာမှာ ဘုရားဖြစ်ရေးပင်ဖြစ်သည်။ သဗ္ဗညုတ ဥာဏ်တော်ကို ရရှိရန်သာ ဖြစ်သည်။
သသပဏ္ဍိတ ယုန်ပညာရှိဘ၀တွင် မိမိအသားကို အလှူခံလာသော ပုဏ္ဏားအို (သိကြားမင်း)အတွက် မီးပုံကြီးထဲ ခုန်ဆင်းကာ အသက်စွန့်လှူဒါန်းခဲ့သည်။ နိဂြောဓသမင် ဘ၀တွင် သားသည်အမေ သမင်မတစ်ကောင် အတွက် မိမိအသက်ကို စွန့်၍ လှူဒါန်းခဲ့သည်။ အသက်နှင့်ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်း တို့ကို စွန့်လွှတ်၍ ပါရမီဖြည့်ပုံကို ဆိုရလျှင် ကောင်းကင်ပြင်ရှိ ကြယ်အရေအတွက်မျှမက မျက်စိများကို လှူဒါန်းခဲ့သည်။ မဟာသမုဒ္ဒရာ ရေပြင်မက သွေးများကို လှူဒါန်းခဲ့သည်။ မဟာပထ၀ီ မြေပြင်မက အသားခန္ဓာတို့ကို လှူဒါန်းခဲ့သည်။ ထိုမျှ ကြီးကျယ်များပြားစွာ စွန့်လွှတ်အနစ်နာ ခံမှုများမှာ သဗ္ဗညုတ ဉာဏ်တော်အတွက်သာ ဖြစ်ချေသည်။
သဗ္ဗညုတဥာဏ်ကိုသာ ရရှိမည်ဆိုလျှင် မည်သည့်အရာကို စွန့်ရစွန့်ရ၊ စွန့် လွှတ်မည် သာ ဖြစ် ပေ သည်။ သဗ္ဗ ညုတ ဥာဏ်ရမှသာ မိမိကယ်မလိုသော သတ္တ၀ါတို့ကို အထွတ်အထိပ် ကယ်နိုင်မည်မဟုတ်ပါလား။ ဤသို့လျှင် သဗ္ဗညုတဥာဏ်တော်ကို ရရှိရေးအတွက် ဘုရားအလောင်းတော်သည် စွန့်ခြင်းကြီးငါးပါးကိုလည်း စွန့် လှူခဲ့ရလေသည်။
ဘုရားအလောင်းတော်သည် ဘ၀များစွာ ပါရမီတို့ကို ဖြည့်ကျင့်ရာ၌ ကျင့်စဉ်ကြီးသုံး
ချက်ကို ဦးထိပ်ထား၍ ကျင့်တောင်ခဲ့သည်။ ထိုကျင့်ဆောင်ချက် ကြီးသုံးမျိုးကို ‘စရိယာ ၃- ပါး’ ဟူ၍ ခေါ်ကြ သည်။ ထို စရိယာ ၃ - မျိုးမှာ
(၁) လောကတ္ထစရိယာ - လောကလူသား ကမ္ဘာသူ ကမ္ဘာသား သတ္တ၀ါ အများ ကောင်းစားချမ်း သာရေး အတွက်ကျင့်စဉ်၊
(၂) ဉာတတ္ထစရိယာ - မိမိ၏ နိုင်ငံနှင့် လူမျိုး ကောင်းစား ချမ်းသာရေး အတွက် ကျင့်စဉ်၊
(၃) ဗုဒ္ဓတ္ထစရိယာ - သတ္တ၀ါအများကို သံသရာဝဋ်ဆင်းရဲမျ ကယ်တင်နိုင်သော သဗ္ဗညုတ ဘုရားဖြစ်ရေးအတွက် ကျင့်စဉ်တို့ဖြစ်ကြသည်။ ဘုရား အလောင်းတော်သည် ဘ၀တိုင်းဘ၀တိုင်း ပါရမီဖြည့်ကျင့်တိုင်း ဤကျင့်စဉ်ကြီး သုံးရပ်ကို ဦးထိပ်ထားခဲ့လေသည်။
လောကတ္ထစရိယာ အရ လူ့လောကအပါအ၀င် သတ္တလောကကြီး တရပ်လုံး တိုးတက်
ရှေးအခါက အင်္ဂတိမင်းကြီးသည် မိစ္ဆာအယူရှိသူ ဗြာဟ္ဓဏတို့၏ ၀ါဒကို မှားယွင်းစွာ လိုက်နာပြီး သူ့အသက်သတ်မှု၊ သူ့ဥစ္စာခိုးမှု၊ သူတပါးသားမယားကို စော်ကားကျူးလွန်မှု၊ မုသားမြောမှု၊ အရက်သေစာ သောက်စားမှုတို့ကို ပြုလုပ်နေသည်။ တစ်တိုင်းပြည်လုံး ငါးပါးသီလ မစောင့်ထိန်းကြဘဲ အကျင့်တရား ပျက်ပြားနေကြသည်။ သမီးတော် ရုစာမင်းသမီး
က ဟောပြသော်လည်း မလိုက်နာကြပေ။ သမီးတော်၏ အဓိဠာန်ပြုမှုကြောင့် ဘုရားအ လောင်းတော်နာရဒရသေ့ ကောင်းကင်မှကြွရောက် တန်ခိုးပြ၍ တရားဟောတော်မှုမှ အင်္ဂတိမင်းကြီး နှင့်တကွ တစ်တိုင်းပြည်လုံး ငါးပါးသီလ စောင့်ထိန်းကြသည်။ ဤသို့လျှင် လူအများ ကောင်းစားရေးအတွက် ဆောင်ရွက်တော်မှုခဲ့လေသည်။
ဉာတတ္ထစရိယာ အရ ဘုရားလောင်းသည် မိမိအမျိုးသားတို့ ကောင်းစားရေးအတွက် ဆောင်ရွက်ခဲ့ပုံကို ဘုရားအလောင်း ကျီးမင်းဘ၀ တွင်လည်းတွေ့မြင်နိုင်သည်။ ပုရော ဟိတ် ပုဏ္ဏားတစ်ဦးသည် ညီလာခံဝင်လာစဉ် ကျီးတစ်ကောင်က မစင်စွန့်ချခဲ့သဖြင့် ကျီးတို့ကို ရွံမုန်းစိတ်နာပြီး ကျီးမျိုးပြုတ်စေရန် ကြံခဲ့ဖူးသည်။ ဘုရင့်ဆင်များ၏ မီးလောင် ဒဏ်ရာ အနာကို ‘ကျီးကန်အဆီဖြင့် သုတ်လိမ်းမှ ပျောက်ကင်းပါမည်’ ဟုလက်စားချေ လိုသောစိတ် ဖြင့် မဟုတ်မမှန် သံတော်ဦးတင်ခဲ့သည်။ ဘုရင်လည်း ကျီးကန်းဟူသမျှ ဖမ်းဆီးသတ်ဖြတ် ခိုင်းသည်။
ဘုရားအလောင်းကျီးမင်းသည် မိမိအသက်ကို စွန့်၍ ဘုရင့်ထံ အရောက်ဝင်ကာ ကျီးတို့မှာ အဆီမရှိကြောင်း တင်ပြလျှောက်ထားခဲ့သည်။ ထိုသို့ အသက်စွန့်၍ မိမိအမျိုးကျီးကန်း များအတွက် ဆောင်ရွက်မှုကြောင့် ကျီးကန်းလောက မျိုးပြုတ်ရေးဆောင် ရွက်ချက် ရပ်ဆိုင်းသွားရသည်။ ဤသို့လျှင် မိမိအမျိုးသား ကောင်းစားရေးအတွက် ဘ၀အဆက်ဆက် ကြိုးပမ်းကျင့်ဆောင်ခဲ့သည်။ ဘုရားဖြစ်တော်မှုသောအခါကား ပြောဖွယ်ရာ
မရှိ၊ ရောဟိနီမြစ်ရေခွဲဝေမှုနှင့် ပတ်သတ်၍ ဆွေတော်မျိုးတော်တို့ စစ်မက်ခင်းကာလက်နက် ဖြင့်ဖြေရှင်းကြမည် ရှိသောအခါ ကောင်းကင်မှ ကြွသွားတော်မှုပြီး ငြိမ်းချမ်းရေးတရား ဟောကြားတော်မှုရာ သာကီဝင် ဆွေတော်မျိုးတော်များ အားလုံး အသက်ဘေးမှ လွတ်ကာ ချမ်းသာရာ ရခဲ့ကြသည်။
ဗုဒ္ဓတ္ထစရိယာ အရ ဘုရားဖြစ်ရေးကျင့်ဆောင် မှုမှာအထူး ပြောရန်မလို၊ ဘုရား အလောင်းတော်သည ဤရည်မှန်းချက်ကြောင့်ပင် ဘ၀များစွာ ပါရမီဖြည့်ခဲ့သည်။ စွန့်ခြင်းကြီး
ငါးပါး ဖြည့်ကျင့်ခဲ့သည်။ ထိုကျင့်ကြံမှု မှန်သမျှ၏ ပဓာနရည်ရွယ်ချက်မှာ ဘုရားဖြစ်ရေးပင် ဖြစ်သည်။ ထိုရည်ရွယ်ချက် ပြီးမြောက်၍ ဘုရားအဖြစ်သို့ ရောက်တော်မှုသောအခါ လူ နတ် ဗြဟ္မာ သတ္တ၀ါအများ၏ အကျိုးစီးပွား ချမ်းသားရေးကိုသာ ၄၅-၀ါ ကာလပတ်လုံး မရပ်မနား ကြိုးစားဆောင်ရွက်တော် မှုခဲ့လေသည်။
Posted by kyaw at 9:04 PM
Original Design by : x-template.blogspot.com.
Modified by :...